Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Tamoxifen (တာမော်စီဖန်)
Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Tamoxifen ကို ခန္တာကိုယ်အခြားနေရာများသို့ပါ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိနေသော ရင်သားကင်ဆာ၊ ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသခြင်း ခံယူပြီးထားသည့် အချို့သော ရင်သားကင်ဆာဝေဒနာရှင်များကို ကုသရန် နှင့် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေရှိသူများတွင် ဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချရန် အသုံးပြုသည်။၎င်းသည် မဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်သော estrogen ဟော်မုန်း၏ ရင်သားတစ်ရှူးများအပေါ် သက်ရောက်သော အစွမ်းအာနိသင်ကို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ခြင်းဖြင့် ရင်သားကင်ဆာကြီးထွားခြင်းကို တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Tamoxifen ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ်ကို အစာရှိသည်ဖြစ်စေ၊အစာမရှိသည်ဖြစ်စေ ၅နှစ်တိတိ သောက်ရပါမည်။ နေ့စဉ်သောက်ရမည့် ဆေးပမာဏမှာ ၂၀မီလီဂရမ်ထက်ပိုလျှင် ဆေးကိုအညီအမျှ တဝက်စီခွဲပြီး မနက်တခါ၊ညနေတခါ သောက်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သောက်နိုင်သည်။ အကယ်၍သင်သည် ဆေးကို အရည်ပုံစံဖြင့်သောက်လျှင် ဆေးအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသည့် ဇွန်း သို့မဟုတ် ကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။ အတိုင်းအတာမှားနိုင်သဖြင့် ပုံမှန်အိမ်သုံးဇွန်းကို မသုံးပါနှင့်။ ဆေးပမာဏ အနည်းအများသည် သင်၏ ရောဂါအခြေအနေ နှင့် ဆေးကို တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ ဆေးအာနိသင် အများဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး ရစေရန် ဆေးကို အချိန်မှန်မှန် သောက်သုံးပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း တူညီသော အချိန်တခုတည်းတွင် သောက်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်၏ရင်သားကင်ဆာသည် အခြားသော နေရာများသို့ပါ ပျံ့နှံ့နေပါက tamoxifen ကို စတင်သောက်သုံးချိန်တွင် ရင်သားနာကျင်ခြင်း၊အရိုးနာခြင်း၊ရောဂါထကြွခြင်းတို့ကို ခံစားကောင်းခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လက္ခဏာများ ခံစားရခြင်းသည် အချို့သောလူနာများတွင် အနာနှင့်ဆေးတည့်သည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ လက္ခဏာများမှာ အရိုးများနာခြင်း၊ကင်ဆာအကျိတ်၏ အရွယ်ကြီးလာခြင်းနှင့် ကင်ဆာအကျိတ်အသစ်များ ထွက်ပေါ်လာခြင်းတို့ပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့မှာ အလျင်အမြန် ပြန်လည်ပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ အဆိုပါ လက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာပါက ဆရာဝန်ကို အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားပါ။ သင်၏ ရောဂါအခြေအနေပိုဆိုးလာလျင်လည်း ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ (ဥပမာ။ ။ ရင်သားတွင် အကျိတ်သစ်ထွက်လာခြင်း)။
Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Tamoxifen ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Tamoxifen ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Tamoxifen ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Tamoxifen ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Tamoxifen ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ Tamoxifen ဆေးသောက်သုံးမည်ဆိုလျှင် အောက်ပါအခြေအနေများကို သတိထားသင့်သည်။
Tamoxifen ဆေးနှင့် သို့မဟုတ် အခြားသောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများ ခံစားရဖူးပါက ဆရာဝန်ကို သေချာစွာအသိပေးပါ(ဆေးသာမက အစားအသောက်၊ဆိုးဆေး၊အစားအစာများကို တာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများပါ အကျုံးဝင်သည်)။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်ဆေးမဟုတ်ပါက ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
ဆေးဝါးအများစုသည် အသက်ကြီးသူများတွင် စမ်းသပ်လေ့မရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းဆေးများသည် လူငယ်လူရွယ်များတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလို အသက်ကြီးသူများတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိ သေချာမသိရသလို မည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်မည်ကိုလည်း တိကျစွာမသိရချေ။ Tamoxifen အသုံးပြုမှုကို အသက်ကြီးသူများနဲ့ တခြားအသက်အရွယ်များကြား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာထားချက်များမရှိသော်လည်း၊ အသက်ကြီးသူများတွင် လူငယ်များနဲ့မတူညီတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ပြဿနာများဖြစ်စေမယ်လို့မထင်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက Tamoxifen သောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
—>ရုတ်တရက် ခန္တာကိုယ်တခြမ်း ထုံခြင်း၊အားနည်းခြင်း
—>ရုတ်တရက် ပြင်းထန်စွာခေါင်းကိုက်ခြင်း၊စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊အမြင်၊အကြား သို့မဟုတ် ခန္တာကိုယ်ဟန်ချက်ထိန်းရာတွင် ပြဿနာများရှိခြင်း။
—>ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ရုတ်တရက် ချောင်းဆိုးခြင်း၊အသက်ရှုလျှင် အသံများမြည်ခြင်း၊အသက်ရှုမြန်ခြင်း၊နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း။
—>ခြေထောက် တချောင်းသို့မဟုတ် နှစ်ချောင်းလုံးတွင် နာခြင်း၊နီရဲရောင်ရမ်းပူနွေးခြင်း။
—>မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော သွေးဆင်းခြင်း၊အဖြူဆင်းခြင်း။
—>ဆီးစပ်တဝိုက်တွင် နာနေခြင်း၊ဖိထားသလို ခံစားရခြင်း။
—>အမြင်ဝေဝါးခြင်း၊မျက်လုံးနာကျင်ခြင်း၊အလင်းကိုကြည့်လျှင် ဘေးနားတွင် ရောင်ခြည်ဝန်းကဲ့သို့ မြင်ရခြင်း။
—>သွေးခြေဥလွယ်ခြင်း၊ပုံမှန်မဟုတ်သောသွေးထွက်ခြင်းများ (နှာခေါင်း၊ခံတွင်း၊မိန်းမကိုယ်၊စအို တို့မှ)၊ အရေပြားအောက်တွင် ခရမ်းရောင် သို့မဟုတ် အနီစက်လေးများ ထွက်လာခြင်း။
—>ချမ်းတုန်ဖျားခြင်း၊တုပ်ကွေး ကွေးသကဲ့သို့ တကိုယ်လုံး နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း။
—>ဗိုက်အပေါ်ပိုင်းအောင့်/နာခြင်း၊ယားယံခြင်း၊ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ဝမ်းအရောင်ဖြူခြင်း၊အသား သို့မဟုတ် မျက်ဖြူသား ဝါခြင်း။
—>အရိုးအဆစ်အမြစ်များ သို့မဟုတ် ကင်ဆာကျိတ်ဆီမှ နာခြင်း။
—>လိင်ဆန္ဒနည်းပါးခြင်း၊မျိုးမအောင်ခြင်း၊လိင်ဆက်ဆံရာတွင် အထွတ်အထိပ်ရောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Tamoxifen ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေကိုသုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင် Tamoxifen ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ သင့်ဆရာဝန် အနေနဲ့ Tamoxifen ကို အသုံးမပြုတော့တာဘဲဖြစ်ဖြစ် သင်သုံးစွဲနေတဲ့ အခြားဆေးတွေကို ပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများကို ယေဘုယျအားဖြင့် Tamoxifen နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး။ သို့သော် အချို့သော အခြေအနေများတွင်မူ သုံးစွဲကောင်းသုံးစွဲပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးများသည် Tamoxifen ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပို၍ဆိုးကောင်းဆိုးစေနိုင်သည်။ သို့သော် အတူတကွ သုံးစွဲခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ကုသမှုရလာဒ်ကိုလည်း ရစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး၏ ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Tamoxifen က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Tamoxifen ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
—>အတွင်းတိမ် သို့မဟုတ် မျက်စိနှင့်ဆိုင်သော ပြဿနာများ (Tamoxifen က ရောဂါအခြေအနေကို ပိုဆိုးစေမည်)
—>သွေးတွင်း ကိုလက်စထရောများခြင်း (Tamoxifen သည် ကိုလက်စထရော ပမာဏကို များစေသည်)
ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေများသူ နှင့် Ductal Carcinoma in Situ (DCIS) သမားများတွင် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းကို လျှော့ချရန်အတွက် Tamoxifen သောက်နေရသူများတွင်
—>Pulmonary embolism ဖြစ်ဖူးသူ
—>သားအိမ်ကင်ဆာရှိသူ (Tamoxifen ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုများစေမည်)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Tamoxifen ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
၂၀-၄၀မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျှင် ၁ကြိမ် သို့မဟုတ် ၂ကြိမ်။ ၂၀မီလီဂရမ်ထက် ပိုလျှင် ဆေးကို မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် ခွဲသောက်နိုင်သည်။
DCISရှိသူ အမျိုးသမီးများအတွက်၊ရင်သားခွဲစိတ်ပြီး ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှု ခံယူထားသူများအတွက်
—>နေ့စဉ် ၂၀မီလီဂရမ်ကို ၅နှစ်တိတိ သောက်ရမည်။
ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေရှိသူများတွင် ဖြစ်ပွားနှုန်းကို လျှော့ချရန်
ရင်သားကင်ဆာ ခွဲစိတ်ထားသူများ သို့မဟုတ် ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသထားသူများအတွက်
—>ရင်သားတစ်ခုလုံးဖြတ်ထုတ်ထားသူများ၊တစိတ်တပိုင်းဖြတ်ထုတ်ထားသူများ၊ချိုင်းကြားရှိ ပြန်ရည်ကြောအကျိတ် (lymph node ) များကို ဖြတ်ထုတ်ထားသူများ နှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသထားသူများအတွက် : ၁၀-၂၀မီလီဂရမ်ကို တစ်နေ့လျှင် ၂ကြိမ်မှ ၃ကြိမ် —>၅နှစ်တိတိ သောက်ရမည်။
ရင်သားကင်ဆာအတွက် (ရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာစေရန်)
—>၁၀-၂၀မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျှင် ၂ကြိမ် သောက်ရမည်။
ဆေးစသောက်ပြီး လအတန်ကြာသည်အထိ ဆေး၏ အာနိသင်ကို သိသိသာသာ တွေ့ရမည်မဟုတ်ချေ။
ကလေးတွေအတွက် Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာများမှာ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ
McCune-Albright Syndrome အတွက်
—>McCune-Albright Syndrome ဝေဒနာခံစားရပြီး အပျိုဖော် စောစီးစွာ ဝင်သော အသက် ၂နှစ်မှ၁၀နှစ်ကြား မိန်းကလေးငယ်များ —> ၂၀မီလီဂရမ်ကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ဖြင့် အများဆုံး ၁၂လအထိ။
Tamoxifen (တာမော်စီဖန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Tamoxifen ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးအရည် : 10mg/5ml (150ml)
သောက်ဆေးပြား : ၁၀မီလီဂရမ်၊ ၂၀မီလီဂရမ်
—->မချုပ်ထိန်းနိုင်လောက်အောင် တကိုယ်လုံး တုန်ခါခြင်း။
Tamoxifen ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
https://www.drugs.com/tamoxifen.htm.Tamoxifen https://www.drugs.com/tamoxifen.htm. Accessed July 15, 2016.
Tamoxifen https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682414.htm. Accessed July 15, 2016.
Tamoxifen http://www.breastcancer.org/treatment/hormonal/serms/tamoxifen. Accessed July 15, 2016.